KrishiPost | Home
किसान को रिपोर्ट
गोलभेंडा खेती एउटा पृथक कथा
Posted on: June 12, 2019 | views: 1446
नवराज चौलागाई ।
पछिल्लो समयमा पढेलेखेका युवा जमात विदेसिरहेका छन् । हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर युरोप मात्र होइन खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनेको संख्या पनि कम छैन । विदेशमा सुख दुःख गरी कमाएको पैसाले नेपाल फर्किपछि घर घडेरी जोड्ने र मोटर गाडी किनेर ऐस आरामको जीवन बिताउने सपना अझै पनि धेरै युवामा देखिन्छ । तर, यहाँ आज मैले यस्तो कथा लेखेको छु जो विदेशी भुमिमा दस वर्ष बिताएर सबैले हेला गरेको पेसा कृषि व्यवसायमा तल्लिन छन् । जगत लिम्बू स्थायी घर धनकुटा हाल सुन्दरीजल काठमाडौं । उनी रोजगारीका लागि करिब दस वर्ष कतार र साउदी अरब बसे । राम्रै अर्थिक जोहो पनि गरे । घरमा श्रीमती र छोरीलाई छोडी विदेसिएका उनी अहिले कृषि व्यवसाय अन्तर्गत गोलभेंडा खेती गरिरहेका छन् ।
करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा उनले गरेको गोलभेंडा खेती रहर लाग्दो मात्र छैन प्रेरणादायी पनि छ । श्रीमती र आफू गरी दुई जनाले सम्हालेको उनको फार्ममा गोलभेंडा मात्र छैन सिमी, बन्दा, काउली पनि फलेका छन् । त्यसो त गोलभेंडा खेती चाहिँ उनको खास रुचिको विषय रहेको छ । मात्र २ दिनको तालिम र आफनो रुचिका कारण उनी खेती गरिरहेका छन । कुनै सरकारी अनुदान र सहयोग विना सुरुवात गरेको उनको फार्ममा अहिले धमाधम गोलभेंडा फलिरहेको देख्न सकिन्छ । मेहनत गर्ने र पसिना बगाउने हो भने आफ्नै देशको माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उनी समयले साथ दिए गोलभेंडाबाटै मासिक एक डेढ लाख रुपैया कमाउन सकिने बताउँछन् । सामान्य रोगब्याधीको आफैं उपचार गर्ने उनी समय समयमा कृषि प्राविधिकहरुसंग सल्लाह लिन्छन् भने कतिपय कुरा सामाजिक सञ्जालहरुबाट पनि सिकेको बताउँछन ।
कृषिमा सरकारको नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन र बजारीकरणको व्यवस्था राम्रो हुन नसक्दा धेरै किसान मर्कामा पर्नेगरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, उत्पादित कृषि उपजलाई बिना बिचौलिया किसानको आलीबाट उपभोक्ताको थालीसम्म पुर्याउन सके कृषि व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । देशलाई कृषिबाटै समुन्नत र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सके देशको माटो पनि मलिलो हुन्छ रोजगारी बढ्छ र विदेसिएका युवालाई पनि आफ्नै देशमा रोजगारी दिन सकिन्छ ।
लकडाउनमा फिदिमका किसानले बजारबासीलाई दिए निःशुल्क तरकारी
फिदिम, १९ चैत । ‘गाउँ बाँचे सहर बाँच्ने र सहर बाँचे गाउँ बाँच्न
कोरोना भाइरस : माछा मासु खानु कत्तिको जोखिम छ ? जन्नुहोस !!
काठमाडाैं,१३ चैत्र । कोरोनाभाइरसबाट संक्रमण एक जना १९ वर्षीय महिलाको
लकडाउन : किसानका दुध खेरा जाँदै , उपभोक्ताले खान पाएनन्
चितवन,१३ चैत्र । कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को सम्भावित जोखिमको रो
Krishi Post - कृषि पोस्ट्
Krishipost.com © 2017. All Rights Reserved